Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ndị na-arụ ọrụ gbasara ala | Netwọk Mgbasa Ozi
Ala na-elekọta mmadụ
Dị ka anyị hụrụ n’isiokwu ndị ọzọ dịka nhazi nke ụwa, ụwa anyị a na-agbanwe mgbe niile. Enwere usoro nke usoro dị n'ime na nke mpụga nke na-eme ka bewa gbanwee mgbe niile. Na nke a, anyị ga-ekwu maka ya ihe omumu banyere ala. Ihe ndị dị n'ime ala bụ ndị na-agbanwe usoro nke mbara ụwa yana ọ bụ maka mmegharị nke efere tectonics.
Na nke a, anyị ga-elekwasị anya na ndị ọrụ nka na mbara igwe na mmetụta ha na ụdị okike ụwa. You chọrọ ịmụtakwu ma dozie ihe edeturu gị na mmata ọzọ? N’isiokwu a ị ga-ahụ ya niile.
1 Mgbanwe ụwa
2 Igha ihu igwe
2.1 Oge ihu igwe
3 Oze na njem
4 Zụta nsị
N'adịghị ka ihe na-eme na ndị na-ahụ maka ọdịdị ala, ndị dị n'èzí anaghị emepụta ndagide, ugwu ma ọ bụ ugwu mgbawa. Ha bụ ndị na-ahazi ala ma na-agbanwe ụdị ya.
Isi mpụga geological elekọta mmadụ ha bụ mbuze, njem na sedimenti. Ihuigwe bụkwa ihe dị ezigbo mkpa ịmara ebe ọ bụ na ha bụ ihe ịtụnanya na-eme na ikuku ma na-emetụta ihu ala. Anyị ga-ahụkwa ụdị nke ihu igwe dị.
Formsdị ala na-enweta site na usoro ndị a dị iche iche. Ọ bụghị na ugwu ga-etolite ma ọ bụ nwee nkwarụ, kama ọ bụ enyemaka na nhazi ya. Dịka ọmụmaatụ, mbuze na-emesị mee ka elu ugwu dị larịị mgbe ọtụtụ nde afọ nke ihe omume gara n'ihu. Dịka ọmụmaatụ, ihe na-egosi oge afọ ugwu dị elu nke elu ya. Ọ bụrụ na ọ nwere ọdịdị a kapịrị ọnụ, ọ bụ nwata ma ọ bụrụ na agbaala ya, mbuze na-aga n'ihu na-eme ihe kemgbe ọtụtụ nde afọ.
Mpụga geological mmadụ nwere ike ịbụ ihe anụ ahụ na kemịkal. Ndị nke mbụ a na-ahụ maka ịgbanwe ụdị ahụ, ebe ndị nke abụọ na-agbanwe kemịkal mejupụtara ebe ha na-arụ ọrụ. Otu ihe atụ dị mkpa bụ ihu igwe mmiri na-agbawa oge.
Okirikiri ala bụ nsonaazụ nke mmekọrịta nke usoro usoro iheomume niile, na mgbakwunye na ọrụ nke ahịhịa na ahịhịa. Ka anyi ghara ichefu na odida obodo mejuputara ihe otutu ihe di ndu di kwa na oganihu ma na enwekwa mmetuta gburugburu. Na n'ezie, mmadu bu ihe ozo na-eme ka otutu ihe di iche-iche taa.
Oge ihu igwe bụ usoro na-agbaji ma ọ bụ gbanwee nkume dabere na omume ya na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Ha nwere ike igbari ma ghasaa ha. Ha na-arụkwa ọrụ na mineral. Ihe na-akpatakarị ihu igwe nkịtị bụ mmiri ozuzo, ice, gbazee, ifufe, na mgbanwe ndị na-aga n’ihu n’ọ̀tụ̀tụ̀ abalị na abalị.
A na-eche na mgbanwe ndị a abụghị ihe edozi na mgbanwe nke nkume na ọdịdị ha, mana ha bụ. Karịsịa na ebe ebe ọkụ ọkụ dị buru ibu (dịka n'ọzara) ihu igwe nkịtị nke mgbanwe okpomọkụ na-adị ukwuu.
E nwere ụdị ihu igwe dị atọ. Nke mbu bu nke anyi kwuru banyere mgbanwe okpomoku. Kemgbe ọtụtụ afọ, mgbanwe ndị a na-aga n’ihu na-eme ka ihe ndị ahụ mebie. Ọ na-emekwa ugboro ugboro na mpaghara nwere ihu igwe nke ala iru mmiri na nnukwu mgbanwe okpomọkụ.
Dị nke abụọ bụ ihu igwe biogenic. Nke a na - akpata site na ọrụ nke microorganisms na ntule dị ka mosses, lichens, algae na mollusks ndị ọzọ na - emetụta ihu okwute. Omume a na-eme ka ike gwụ ha mgbe niile ma na-eme ka ha nwee ike ịme ihe ndị ọzọ.
Ihe anyi hapuru anyi bu ihu igwe. Nke a bụ ihe na-ewere ọnọdụ na ihu igwe dị jụụ na na-akpata mmeghachi omume kemịkal nke na - eme n’etiti ikuku na ikuku na mineral dị na nkume. N’okwu a, ihe na-ewere ọnọdụ bụ mbibi nke ụmụ irighiri ihe ndị a. Mmiri na ọnụnọ nke gas dị ka oxygen na hydrogen na-abụ ihe na-akpali maka mmeghachi omume kemịkal na-akpata ihu igwe.
Otu n'ime ihe ndị bụ isi na-eme na nke a bụ oxidation. Ọ bụ nchikota oxygen sitere na ikuku na-agbaze na mmiri na mineral site na nkume. Nke a bụ mgbe a na-akpụ oxides na hydroxides.
Oze na njem
Mbibi bụ usoro na-eme mgbe mmiri ozuzo, ifufe, na mmiri na-aga n'ihu na-eme na nkume na sedimenti. Ha na-ebute ekewa na mmebi nke nkume Ma ọ bụ usoro na-aga n'ihu. Dị ka nkume na-agbawa agbawa, ha anaghị ada ụda ma ọdịdị ha na nhazi ha nwere nrụrụ.
Ationgbọ njem bụ usoro sitere na mbuze. A na-ebugharị ihe ndozi na iberibe ndị e kewara site na mbuze na nkume, ifufe, iyi mmiri, glaciers, wdg. Okwesighi ka esi esi n’elu ala were ebu. Enwere ike ibuga ha n'ụzọ atọ:
Na-arahụ, nke ha na-agagharị n’elu ala.
Nkwusioru. Nke a bụ sedimenti ndị a kwụsịtụrụ ma na mmiri ma n'ikuku. Dịka ọmụmaatụ, obere ahụ ma ọ bụ epupụta ma na mmiri mmiri ma na ikuku ikuku.
Diluted. Ha bụ akụkụ nke mejupụtara mmiri ma ọ bụ ikuku.
Ọ bụ nke ikpeazụ mpụga geological gị n'ụlọnga na anyị enweghị. O kwekọrọ na ntinye nke ihe siri ike nke ebugharị. A na-akpọ ihe ndị a sedimeti. Mpaghara ndị nwere ọnụ ọgụgụ kacha elu Ha bu onu nke osimiri na ebe di ka oke osimiri na oke osimiri.
A na-ewepụsị nsị ndị e debeburu ozugbo, n'aka nke ndị ọrụ ala ndị ọzọ dị ka mbuze na ihu igwe. Ọ bụrụ na sedimenti ndị a enweta nnukwu ogo na mkpokọta ọtụtụ afọ, ha na-etolite sedimentary nkume.
Nke a bụ otú usoro ọdịdị mbara ala nke ụwa anyị si arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ala na-elekọta mmadụ